Fanohanana akanjo baolina kitra 10 ambony indrindra 2022 - Victor Mochere
Ny lalao baolina kitra no be mpijery indrindra eran'izao tontolo izao. Noho izany, ny klioban'ny baolina kitra dia manome fidiram-bola lehibe avy amin'ny sponsorship. Manakaiky ny klioba ny marika hanehoana ny lazany ary hiteraka varotra bebe kokoa, ary izao tontolo izao dia efa nanatri-maso ny sasany amin'ireo fifanarahana mpanohana manankarena indrindra amin'ny tantaran'ny baolina kitra. Ny klioban'ny baolina kitra dia mahatsapa ho tsara vintana fa manana marika mandoa bebe kokoa ho an'ny mpanohana. Ny vola fanampiana dia ampiasain'ny klioba hanatsarana ny mpilalao sy ny fifaninanana.
Ireto ny 10 fifanarahana mpanohana lobaka klioban'ny baolina kitra ambony indrindra.
Voasarona ny vanim-potoana
$ 413 tapitrisa
$ 400 tapitrisa
$ 325 tapitrisa
$ 324 tapitrisa
$ 283 tapitrisa
$ 280 tapitrisa
$ 221 tapitrisa
$ 171 tapitrisa
$ 166 tapitrisa
$ 159 tapitrisa
Firenena 20 be mpitsidika indrindra eran'izao tontolo izao 2022
Ahoana ny fomba fiasan'ny tambajotra doka